Ukuqhathaniswa kwe-myomas ye-uterine
Impilo yabesifazane iyinto ebalulekile ebantwini. Ngabesifazane abanikezwa ilungelo lokunikeza impilo entsha, ngakho-ke noma yisiphi isifo sofuzo kufanele siphathwe ngokushesha ngangokunokwenzeka. I-Myoma yesibeletho ayikho into ehlukile. Ngokufana nokuphathwa kwalesi sifo, kubalulekile ukuhambisana nemithetho eminingi, ngoba nge- myoma ye-uterine kunamanye okungafani .
Kunezinhlobo ezimbili eziyinhloko zalesi sifo: i-rhabdomyoma ne-leyomyoma. Owokuqala uvela emathunjini omzimba ahlotshisiwe, okwesibili - kusuka kwesakhiwo esimisiphayo se-muscle. Ukuthuthukiswa kwenzeka cishe ngokufanayo. Odokotela balezi zihlamba kuthiwa i-myoma ne-fibroids. I-tumor ngokwayo iyinothi elinezinyosi eziqhelile ngokucacile ezicukwaneni ezizungezile. Uma kudala, i-myoma ifana ne-adipose enkulu ehamba kalula ngaphansi kwesikhumba.
Kuze kube manje, izizathu zezokwelapha zokwakhiwa kwe-fibroids aziwa. Phakathi kokucabanga okuyisisekelo ukungalingani kwe-hormonal kanye nokuzalwa. Iminyaka engaphezu kwengu-30, ukungabi nabantwana, ukwephulwa komjikelezo wenyanga , ukukhipha isisu, ukunganeliseki ngokocansi, ukwedlula ngokweqile - lezi ziyizinkomba, okukhona okwandisa ingozi ye-myoma.
Yini engenakwenziwa nge-myoma?
Ukuvimbela lesi sifo ukuba singaqhubeki, akubanga imbangela nezinkinga zokuvimbela, odokotela batusa ukunamathela emithethweni ethile echaza lokho okungenakwenziwa nge-myoma yezizalo.
Ngakho-ke, owesifazane udinga ukugcina ibhalansi yakhe ngokwengqondo, ngoba ukucindezeleka, izingxabano zomndeni - yilesi sizathu sokuthi ama-hormone aqhubekele phambili ekukhuleni kwamanothi.
Okwesibili, abesifazane abanalo ukuxilongwa ngeke bakwazi ukubekezelela ngisho nokuphakamisa izinto ezinesisindo esingaphezu kwamakhilogremu amathathu. Ukunganakwa kwalesi siphakamiso kuholela ekusweleni kwesibeletho, ukuthuthukiswa kwezinkinga ezihlukahlukene. Okwesithathu, abesifazane balimala ngokushisa okushisa. Yingakho awukwazi ukushisa ilanga nge-myoma.
Impendulo engalungile embuzweni wokuthi kungenzeka yini ukuhamba nge-myome, uhlale ekugeza, uthathe okugeza okushisayo noma nje ukushisa ilanga, uzothola kunoma yimuphi udokotela.
Noma yimuphi umphumela womzimba emzimbeni wesifazane nawo uphikisana. Kungakhathaliseki ukuthi ungenza massage nge-myoma. Akunakwenzeka, ngoba ukugcoba okwehlukile noma okulinganayo kwesisu esiswini esingaphansi, izigubhu, isifunda kanye namathanga okuvuthayo kuqhuma ukukhula kwe-tumor. Ngaphezu kwalokho, lezi zinqubo zingabangela izinzwa ezibuhlungu.
Ngokuhlukile, kubalulekile ukugxila ezindabeni zokuvimbela ukukhulelwa. Kudingekile ukuba usebenzise ukunakekelwa okukhulu ukugwema ukukhulelwa. Ngesikhathi ukwelashwa kwe-fibroids, noma yikuphi ukuqhuma kwama-hormonal yomzimba ukucindezeleka. Lokhu, ikakhulukazi, kuphathelene nokukhipha isisu.
Uma uhlela ukulungisa izindawo zezinkinga nge-cavitation, khona-ke i-myoma iyinkinga yokuphikisana nale nqubo. Kungcono ukusebenzisa i-cryoliposuction, i-pressotherapy noma i-ultraposic liposuction. Ukusetshenziswa kwendlela ethile kufanele kukhulunywe ngayo nomjozi wezifo zogciwane.
Uma uyazibuza ukuthi kungenzeka yini ukuba i-syringe ne-myoma, imithi yomdabu isabela kahle. Umhluzi we-sorrel yamahhashi, isambulela noma isixazululo esijwayelekile soda sisiza ukunciphisa ubukhulu besisu. Umuthi wendabuko ukhuluma ngezindlela ezifanayo ngokuhlanganyela kokungabaza.
Ucwaningo lwanamuhla lufakazela ngokuqiniseka ukuthi ezinye imikhiqizo zithinta ukukhushulwa kokukhula kwesisu. Ngakho-ke, yini enganakudliwa nge-myoma ye-uterine? Inyama ebomvu, isinkwa semvubelo, inqwaba yetshezi esetshenzisiwe iqhubekisela phambili ukukhula kwama-fibroids. Namuhla, ezinye imikhiqizo zibhekwa njengezithandwa kakhulu, ngoba abesifazane bonke bazimisele ukulahlekelwa isisindo. Abantu abaningi bayazibuza ukuthi i-ginger ingasetshenziswa yini ku-myoma, ngoba ngokuvamile iyingxenye ebalulekile yokudla. Kungenzeka, futhi ngisho nangaphezulu - kudingekile, ngoba i-ginger, i-almond, inhlanzi ne-bran inomthelela omuhle ekwelapheni kwe-fibroids.
Ukuyeka esikhathini sokugcina
Indlela yokwenza ubulili bube mncane?
Ingabe izintombi zingasebenzisa amathoni?
I-thiosulfate ye-sodium e-gynecology
I-Cauterization yokuguguleka komlomo wesibeletho
Ubuhlungu ngemva kokuvuthwa kwabesifazane
Kungenzeka yini ukufudumala nge-cystitis?
UCatherine Zeta-Jones wancoma uMichael Douglas ngomnyaka weshumi nambili womshado
Ungabambezela kanjani ukuya esikhathini ngesonto?
Ungasusa kanjani isidleke se-hornet ebhaleni?
Amakhishi amancane ekhoneni
Beshbarmak kusuka inkukhu
Ungathatha kanjani i-calcium?
Izisobho ezingu-18 ezinezithako ezingavumelani kakhulu
U-Adam Levin nomkakhe
I-Britney Spears Tattoo
URobert Pattinson noKristen Stewart - izindaba zakamuva
I-bronchitis yokuvimbela - ukwelashwa
I-Blue Lagoon (Laos)